Activities – UM2 alumni
By um2alumni	on May 15, 2020 in Activities, News
– ဆေး(၂) ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းမှ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံသို့ COVID19 ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆေးပစ္စည်းများနှင့် Emergency department အတွက် ကွန်ပျူတာ မှတ်တမ်း အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် Computer များလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။– မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံ Emergency department အတွက် EMR software နှင့် Network infrastructure ကို MMUA company (#MMcities) မှ လှူဒါန်းပြီး နည်းပညာ အမြဲထောက်ပံ့မည်ဟုသိရသည်။– EMR software သည် လူနာမှတ်တမ်းများပြုစုပေးသော Software နည်းပညာဖြစ်ပြီး လူနာအတွက်ရော ဆရာ၀န်များအတွက်ပါ အလွန်အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
By um2alumni	on March 20, 2020 in Activities, News
(၂၂.၆.၂၀၁၉) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ နတ်သံကွင်းတိုက်နယ်သို့ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအသင်း နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးခရီးစဉ်
(၂.၁၂.၂၀၁၉) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အိမ်မဲမြို့နယ်သို့ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအသင်းနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် (ဆေးရုံဌာနများ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးခရီးစဉ်
(၈.၁၂.၂၀၁၈) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖြူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝဲကြီးတိုက်နယ်သို့ ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအသင်းနှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် (ဆေးရုံဌာနများ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးခရီးစဉ်
Covid-19 ကုသရေးအတွက် ဆေးရုံကြီးများသို့ လှူဒါန်းမှု
University of Medicine (2) Library, First Floor.
No (709-772), Kaymarthi Road, Sa Ward, North Ookalar Township, Yangon, Myanmar.
(959) 420757601, (959) 420757602
Dr.Yi Yi Tin – (959) 5085183
Dr.Aung Naing Win-(959) 43322990
Dr.Moe Naymin – (959) 5044868
Dr.Khin Maung Hlaing – (959) 421102895
UM2 ALUMNI © 2022 All Rights Reserved. Designed By MMCities